जोखिम जापानिज इन्सेफलाइटिसको – Sourya Online
जोखिम जापानिज इन्सेफलाइटिसको
सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख २५ गते २:२८ मा प्रकाशित
एकीकृत नेकपा (माओवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मालाई जापानिज इन्सेफलाइटिसले सिकिस्तै बनायो । नेपालमा उपचार सम्भव नभएपछि वैशाखको पहिलो साता भारतको गुडगाउँस्थित मेदान्त अस्पताल लैजानुपरेको थियो । बढी नै सिकिस्त अवस्थामा पुगेपछि उनलाई भारतबाट नै एयर एम्बुलेन्स मगाएर उपचार गर्न लगिएको थियो । त्यहाँको दुई साता लामो उपचारपछि मात्रै उनलाई निको भयो ।
लामखुट्टेको टोकाइका कारण लाग्ने यो रोग गर्मी मौसमको सुरुआतसँगै तराईका विभिन्न स्थानमा देखिन थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार तराईमा हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच सय मानिस इन्सेफलाइटिसकै कारण मर्ने गरेका छन् । सामान्यतया वैशाखदेखि जापनिज इन्सेफलाइटिसको प्रकोप सुरु हुन्छ र असोज महिनासम्म रहन्छ । महाशाखाले यस वर्ष यसबाट हुन सक्ने मृत्यु रोक्न सुरुदेखि नै आवश्यक तयारी गरिसकेको जनाएको छ ।
महाशाखा प्रमुख डा. जिडी ठाकुरका अनुसार जापानिज इन्सेफलाइटिस क्युलेक्स जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग हो । संक्रमित घोडा, सुँगुर, हाँसलगायतलाई टोकेको क्युलेक्सले आफूसँगै यसका जीवाणु बोकेर ल्याउने अनि स्वस्थ मानिसलाई टोक्ने क्रममा यो जीवाणु मानव शरीरमा सारिदिने गर्छ । तर, पशुपक्षीलई टोक्दा सरेको जीवाण्ुाले लामखुट्टेलाई भने कुनै असर गर्दैन । ‘लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने जीवाण्ुाले मानिसको मस्तिष्कमा असर पुर्‍याउँछ अनि बेस्सरी ज्वरो आउने, बेहोस हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन्,’ डा. ठाकुरले भने, ‘यो रोग लागेपछि बिरामीलाई पक्षघात हुने, अपांग हुने र अन्त्यमा मृत्युसमेत हुने जोखिम रहन्छ । ’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. शशी शर्माका अनुसार जापानिज इन्सेफलाइटिस फ्लेभी भाइरसको संक्रमणबाट लाग्ने गर्दछ । सरेपछि सिधै दिमागमा असर गर्दछ । ‘संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइ नै यो रोग लाग्नुको मुख्य कारण हो,’ डा. शर्माले भने, ‘संक्रमित सुँगुर, बंगुर, हाँस आदिलाई टोकेर संक्रमित भएको क्युलेक्स जातको पोथी लामखुट्टेले मानिसलाई टोक्दा यो रोग लाग्छ ।’ उनका अनुसार यो रोग लाग्नबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय लामखुट्टेबाट बच्नु नै हो । यसका लागि सधैँ झुल टाँगेर सुत्ने, लामखुट्टे भगाउने धूप तथा मल्हमको प्रयोग गर्ने, घरबाहिर नसुत्ने, साँझपख बाहिर निस्कँदा पूरा बाहुला भएको लुगा तथा सुरुवाल लगाउने गर्नुपर्छ ।
डा. ठाकुरका अनुसार यो रोगको लक्षण देख्नासाथ बिरामीलाई जतिसक्दो चाँडो नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा लगी उपचार गराउनुपर्छ । यसो गर्दा बिरामीलाई अपांग हुन वा मृत्यु हुनबाट बचाउन सकिन्छ । राम्रोसँग स्याहार–सुसार गर्नुपर्छ । ‘इन्सेफलाइटिसले आक्रमण गरेपछि तत्काल उपचार भएन भने मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ,’ डा. ठाकुरले भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्यसंस्थामा लगिहाल्नुपर्छ ।’
– बेस्सरी ज्वरो आउने
– घाँटी कडा हुने
– कम्पन हुने
– पक्षघात हुने
– लामखुट्टेको नियन्त्रण गर्ने तथा टोकाइबाट बच्ने ।
– लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि घरवरिपरिको वातावरण सफा राख्ने । पानी जम्ने खाल्टाखुल्टी पुर्ने ।
– बढी प्रभावित हुने १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई यो रोगविरुद्ध खोप दिने ।
– पानी जम्ने ठाउँमा कीटनाशक औषधि छर्ने वा मट्टीतेल, मोबिल आदि हाल्ने ।
– सुँगुर, बंगुर, हाँस, घोडा आदि पशुपक्षी व्यवस्थित ढंगले पाल्ने र सम्भव भए सुँगुर, बंगुरलाई यस रोगविरुद्धको खोप दिने ।
– पशुपक्षीको खोर मानिस बस्ने घरभन्दा टाढा राख्ने ।
– सम्भव भएसम्म घर तथा सुँगुर, बंगुरको खोरको झ्याल–ढोकामा मसिनो जाली राख्ने ।